Lingo Play: ဘာသာစကားသင်ယူနိုင်သော application- နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများကို အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့သင်ယူနိုင်ပြီ -
ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ဘာသာစကားအသစ်တွေကို လျင်လျင်မြန်မြန် ထိထိရောက်ရောက် သင်ယူနိုင်မယ်။
စကားလုံးအသစ်တွေ အသုံးအနှုန်းအသစ်တွေကို အခြားအခြားသော အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူတွေနဲ့ အတူယှဉ်ပြိုင်ဆော့ကစားရင်း လေ့လာကျက်မှတ်ကြမယ်။
သင်ကြားပေးသောမည်သည့်ဘာသာစကားကိုမဆို လေ့ကျင့်ရင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေ ရယူကြမယ်။
Lingo Playနဲ့ အတူတူ ဘာသာစကားအသစ်တွေ သင်ယူကြရအောင်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ (အမေရိကန်၊ ဗြိတိသျှ)၊ ဂျာမန်ဘာသာ၊ ပြင်သစ်ဘာသာ၊ စပိန်ဘာသာ၊ အီတလီဘာသာ၊ ပေါ်တူဂီဘာသာ (ပေါ်တူဂီနှင့် ဘရာဇီး)၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ တရုတ်ဘာသာ၊ ဂျပန်ဘာသာ၊ ဗီယက်နမ်ဘာသာ၊ အင်ဒိုနီးရှားဘာသာ၊ ထိုင်းဘာသာ၊ ဟင်ဒူဘာသာ၊ ဟီဘရူးဘာသာ၊ နော်ဝေဘာသာ၊ ပိုလန်ဘာသာ၊ ချက်ဘာသာ၊ Slovak၊ ဆွီဒင်ဘာသာ၊ ဖင်လန်ဘာသာ၊ ဒတ်ခ်ျဘာသာ၊ Danish၊ ဟန်ဂေရီဘာသာ၊ ဂရိဘာသာ၊ ရိုမေးနီးယားဘာသာ၊ တူရကီဘာသာ၊ ရုရှားဘာသာ၊ အာရပ်ဘာသာ
အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဘာသာစကားများ လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ သင်ယူနိုင် ပြီး စကားလုံးအသုံးအနှုန်းသစ်များကို အခြားအွန်လိုင်းသုံးစွဲသူများနှင့်အတူ လေ့လာကျက်မှတ်နိုင်သည်။
Lingo Playဘာသာစကားသင်ယူရေး app သည် သင်ခန်းစာများနှင့် သင်ရိုးများကို အခြေခံမှစ၍ အဆင့်မြင့်အထိ အဆင့်အမျိုးမျိုးခွဲခြား၍ ဘာသာစကားလေ့လာသူတိုင်းနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဖန်တီးရေးဆွဲထားသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော စကားလုံးအသုံးအနှုန်းသစ်များကို လေ့လာနိုင်ပြီး ထိရောက်လျင်မြန်စွာ လေ့လာမှတ်သားနိုင်မည်။ ဘာသာစကားအသစ် စတင်သင်ယူသူဖြစ်စေ၊ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ပြီးသူဖြစ်စေ သင်၏ဝေါဟာရများကို အမြဲတစေ ဆန်းစစ်လေ့ကျင့်နိုင်မည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Lingo Playနှင့်အတူ ဘာသာစကားအသစ်အသစ်တွေကို ဆော့ကစားရင်း သင်ယူလေ့ကျင့်ကြရအောင်။
သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ဘာသာစကားအသစ်တွေကို အတူတကွ ပျော်ရွှင်စွာသင်ယူကြမယ်။
သင်၏ဝေါဟာရများကို လေ့ကျင့်နေခြင်းဖြင့် အမြဲတိုးတက်နေစေမယ်။
အဆင့်သတ်မှတ်ပေးသည့် ပြိုင်ပွဲများတွင် ဝင်ရောက်ပါဝင်ပြီး ဆုတံဆိပ်တွေရယူကြမယ်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော စကားလုံးအသုံးအနှုန်းအသစ်တွေ ရှာဖွေလေ့လာသင်ယူကြမယ်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ တခြားသုံးစွဲသူတွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ်။
Lingoမှ သင်ကြားပေးသည့် မည်သည့်ဘာသာစကားကိုမဆို သင်ရိုးပြီးဆုံးအောင် လေ့လာပြီး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူနိုင်မယ်။
Google Playနှင့် Apple Storeတို့တွင် ရယူနိုင်ပြီ
Lingoနဲ့အတူ ဘာသာစကားသင်ယူဖို့ စမ်းကြည့်ကြရအောင်!
ဘာသာစကားအသစ်တွေကို အချိန်တိုတိုနဲ့ အကျိုးရှိအောင် သင်ယူကြရအောင်!
စာလုံးကဒ်များတွေနဲ့ ဝေါဟာရတွေကို ထိထိရောက်ရောက် သင်ယူမှတ်သားကြမယ်။
ဝေါဟာရအသစ်များစွာကို ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီး သိရှိပြီးသောဝေါဟာရများကိုလည်း ပြန်လည်လေ့ကျင့်နိုင်မယ်။
အသုံးအနှုန်းများနှင့် စကားလုံးတွဲများကို သင်ယူခြင်းဖြင့် စကားပြောပိုမိုချောမွေ့အောင် လေ့ကျင့်နိုင်မယ်။
အဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးနောက် အစမ်းစာမေးပွဲများအဆင့်ဆင့် ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရယူနိုင်မယ်။
Lingo ဘာသာစကားသင်ကြားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို မိတ်ဆက်လိုက်ကြရအောင်
ဘာသာစကားသင်ယူရေး app ကို Apple Storeနှင့် Google Playများတွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်။”}” Download language learning app Lingo Play which is available for smartphones and tablets in Apple Store and Google Play
သင်၏ လက်ရှိသင်ယူလက်စ dataများကို serverပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းရန်နှင့် deviceတခုမှတခုကြား sync လုပ်နိုင်ရန် sign in လုပ်ပါ။
Lingoကို သန်းပေါင်းများစွာသော သင်ယူသူများက သုံးစွဲလျက်ရှိပြီး သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနှင့် အတူတကွ ဆော့ကစားရင်း လေ့ကျင့်ရသည်က ပို၍ပျော်စရာကောင်းပါလိမ့်မည်။ သင့်သူငယ်ချင်းများအား Lingoကို သုံးဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရအောင်!
Lingo Play Appကို ယနေ့ပဲ ရယူလိုက်ကြပါစို့!
Lingo Playသည် English Français Deutsch Español Português Italiano 日本語 中文 Korean Русский العربية Türkçe စသည့် ဘာသာစကားများ၏ စကားလုံးများနှင့် အသုံးအနှုန်းသစ်များကို လျင်မြန်ထိရောက်စွာ သင်ယူလေ့လာနိုင်သည့် နေရာတခုဖြစ်သည်။